Wariye Kilwe oo la xukumay | KEYDMEDIA ONLINE
Wariye Kilwe oo ka howl gali jiray degaannada Maamulka Puntland ayaa lagu xakumay maanta xarig kaddib markii Maxkamad lasoo taagay.
BOOSAASO, Soomaaliya - Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa saddex bilood oo xarig ah ku xukuntay Wariye Kilwe Aadan Farax oo Maamulka Puntland uxirnaa muddo 60 cisho ah.
Waxa ay maxkamadu sheegtay in eedaha loo soo jeediyey Wariye Kilwe ay kamid tahay in uu duubay sawirka Madaxweyne Deni oo la jeexjeexayo.
Hogaamiyaha Maamulka Puntland Saciid Deni ayaa hore u sheegay in wariyaha uu doonayay in uu si fudud ku noqdo qof caan ah, sidaa daraadeedna isagoo aan ka fiirsan uu faafiyay muuqaallo aan loo baahneen.
Wariye Kilwe ayaan isagoo helin wax caddaalad ah waxaa xabsi lagu hayay muddo laba bil ah, waxaana ugu dambeyntii lasoo taagay maxkamad ciidan taasoo hareer marsan xeerka garsoorka dalka, "Nin wariye ah in maxkamad ciidan lasoo taago meelna kuma qorna" sidaas waxaa ku andacoonayay ururrada saxaafadda udooda ee ka howl gala Soomaaliya.